Zvinokwanisika here kusika backlinks yemhando yewebhu yechangobva kusimbiswa?
Zvinogona kunge zviri nyore kuwana backlinks kune e-commerce website. Zvisinei, iwe unogona kudzivisa iyi yekutsvaga injini yekugadzirisa maitiro sezvazviri HERE KUTI bhizimisi rako ribudirire. Ndiyo mamiriro ekuwanda kwemabhizimusi eInternet. Iyo inogona kunyanya kunyengera kune webvhodhi iyo isina bhulogi.
Unofanirwa kuva wakagadzirira kuti hurongwa hwekuvaka hutano huchatora nguva yakawanda uye kushanda pasinei nokuti iwe unogona kunzwa pamusoro peiyo nzira kubva kune mamwe masangano ekutsvaga kugadzira injini. Vanopikira kuumba yakasimbiswa nehuwandu hwehupfumi mukati memwedzi pamutengo unonzwisisika. Zvisinei, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti zvinhu zvose zvinonzwika zvakanaka kwazvo kuti zvive zvechokwadi. Muzvokwadi, zvinotora mwedzi mitanhatu kana kunyanya zvichienderana nebhizimisi rako uye misika yemisika.
Muchiedza chekugadzirisa kweGoogle kwekupedzisira, unofanirwa kuchenjerera zvikuru kuhutano hwemashure. Vanoda kuvakwa pane zvakakosha kumhizha yako, kunyatsorongedza webhupo. Uyezve, unofanirwa kutarisa kana webusaiti yepamutemo yakamborapwa kare kana kuti kwete. Kuumba backlinks, iwe unogona kusimbisa nzvimbo dzako pane peji rekutsvaga kana kuvhiringidza ivo vachiratidza Google kuti hauna kutendeseka.
Iyi nhoroondo yakagadzirirwa kugoverana newe mamwe mazano ekugadzirisa mazano ekushanda anoshanda zvakanyatsonaka kune e-commerce web sources.
Nzira dzekugadzirisa zvikwereti zvakare
Murume anofambisa nzira
nzira dzakawanda dzakasiyana. Zvisinei, shure kwekukundikana kwavo, hukama hwavo hunoramba huripo. Vashandi vavo vekare vezvebhizimisi vachiri kubatanidza kwavari nokuti havana nzira yekuziva mabhizinesi aya haapo uye haatongororizve. Mapeji avo epakombiyuta achiri kushanda, asi hauna chero kukosha kana motokari. Muzviitiko zvakawanda, kuputsika kwekubatanidza checkers hakugoni kuwana.
Kushandisa "nzira inofambisa varume," unogona kushandisa mapeji asina kuwanikwa. Iwe unogona kufarirwa nehutano hwehutori hwakafanana neyako, kuwana mawebsite akafa akabatanidza kwavari. Iwe unogona kukumbira vanhu ava kuti vauye kumashure kune webhusaiti yako pane. Nokushandisa iyi iri nyore nzira yekuvaka nayo yakagadzirwa naBrian Dean (Backlinko SEO blog muvambi), unogona kuvaka backlinks yemhando yako yepaiti nenzira yakasununguka uye yehupenyu.
Mutengo unotaura chivako chekuvakidzana
Iyi nzira yekuvaka yakabatanidza inoshanda zviri nyore uye inogona kushandiswa nemabhizimisi ose epaIndaneti anoda kuda kuumba zvakakonzera kumashure. Chinhu chose chaunoda ndechokuwana kuti ndeipi michina yehutori ikozvino inotaura nezvechigadzirwa chako uye zvigadzirwa zvaunotengesa, uye wovabvunza nomutsa kuti vawedzere nzvimbo yako yekubatanidza kuongororo dzavo. Zvisinei, usati wabvunza backlinks, unofanirwa kutarisa kana nzvimbo yewebhu inogona kunge yakakura yekuvakira mukana wekuti iwe kana kuti hauna kukosha kwako. Chimwe chinhu chaunoda kutarisa ndechekuti izvi zvinotaurwa hazvibvumirwi Source .